Chess 🥇 Pinda uye utambe Chess muEmulator.Online
Chess: Maitiro ekutamba nhanho nhanho 🙂
Kuti utambe Chess pamhepo mahara, tevera aya nhanho nhanho mirairo:
1 danho. Vhura browser yako yaunofarira uye enda kune webhusaiti yemutambo Emulator.online.
2 danho. Ukangopinda webhusaiti, mutambo unenge watove kuratidzwa pachiratidziri. Unofanira chete rova kutamba.
3 nhanho. Iyo chikuva inokutendera iwe kusarudza pakati pekutamba ne robot kana kutamba uchipesana nemumwe munhu anosangana newe. Unogona "Wedzera kana bvisa ruzha", Sarudza iyo"Chikamu chekutamba"Isa mufananidzo mu"chidzitiro chizere"uye gadzirira!.
4 nhanho. Basa rako rinenge riri rekusiya mambo pasina chero kufamba kunokwanisika, uchigara uchifunga mitemo yemutambo. TO
5 nhanho. Mushure mekupedza mutambo, tinya zvigadziriso kuti utambe zvakare.
Onawo iyo Yepamutemo Chess Mitemo kana iwe uchida kuziva iyo mutemo wepasi rese wepamutemo yemutambo uno unozivikanwa.
Chii chinonzi Chess?
Chess ndeye mutambo webhodi kutandara uye kukwikwidza kwevatambi vaviri. Inoitwa pane imwe square board uye yakakamurwa kuita makumi matanhatu nematanhatu mativi, zvimwe dema uye chena. Kune rimwe divi kune zvidimbu gumi nezvitanhatu zvichena uye kune rimwe racho zviyero zvakafanana zvezvitema.
Mutambi wega wega ane kodzero yekufamba kamwechete panguva. Chinhu chemutambo kutarisa muvengi.
Ndiwo mutambo unoda kufunga zvine musoro uye zano, haibatanidzi chinhu chemhanza, kunze kwekutorwa kwemavara pakutanga kwemutambo.
Iyo chess bhodhi ine Zvikwere makumi matanhatu nezvina zvakagoverwa mumakoramu masere (yakamira) uye mitsara misere (yakatwasuka), imwe neimwe iine zvikwere zvisere. Idzi dzimba dzakasviba uye dzakareruka. Rutivi rwekutanga kuruboshwe kuruboshwe rwebhodhi rinofanira kuva dema dema uye yekupedzisira mraba kurudyi machena machena.
Chikamu chimwe nechimwe chinosarudzwa netsamba inomhanya kubva A kusvika H, apo mitsara yakasarudzwa nenhamba kubva ku 1 pa 8 . Nenzira iyi, sikweya yega yega inosarudzwa iine tsamba uye nhamba inoenderana nekoramu uye mutsara (a1, b6, f5, nezvimwewo). Iyi ndiyo standard classification system mumakwikwi epamutemos.
Mumwe mutambi ane 16 zvikamu, zvakare yakakamurwa kuva chiedza uye rima. Zvidimbu zviri, maererano nemutengo:
Cherechedza: Vamwe vatambi ve chess havafungi pawns sezvidimbu. Piece values ​​inogona zvakare kusiyana, kusanganisira zvichienderana nenzvimbo yechidimbu pabhodhi.
Pakutanga kwemutambo, zvidimbu zvakagoverwa pabhodhi zvinotevera: zvidimbu zvichena zvakaiswa pamutsara 1, inodzivirirwa ne mutsara wepawoni mumutsara 2, apo zvidimbu zvidema zviri pamutsara wechi8 uye pawns yake pana 7. Cherekedza pazasi:
Vatangi vanowanzo nyonganisa chinzvimbo chaMambo naMambokadzi, asi kuti zvive nyore, ingo rangarira izvo mambokadzi anogara achitanga mutambo nekugara munzvimbo yemuvara wakafanana (White Mambokadzi muWhite House, Nhema Mambokadzi muBlack House).
Naizvozvo, chena mambokadzi inogara square D1, apo mambokadzi mutema anogara pachivara D8. Kugadziriswa uku kunoshandiswa kudzivirira kuti Mambo asarwadziswe chaipo pakuvhura, sezvingave zvakadaro kana Mambokadzi anopikisa akaiswa mufaira rimwe chete.
Bhodhi rakakamurwa kuva mapapiro maviri:
Zvidimbu zvakatumidzwa zita rake bapiro. Shongwe dziri mukati a1 y a8, semuenzaniso, ivo vanodanwa Shongwe-Mukadzi, uku shongwe dziri mukati h1 uye h8, Torre-Rei. Izvozvowo zvinoitika nezvimwe zvidimbu, uye kunyangwe nemapundu, ayo anodanwa zita rechidimbu chavanochengetedza. Iyo pawn mukati e2 ndiye mambo wepondo, pawn mu d2, mambokadzi wema pawn, iyo pawn in f2 anonzi mambo wepawhiti-bhishopi uye pawn mukati c2, mambokadzi wepawhiti-bhishopi, zvichingodaro.
Chess mutambo wekare zvekuti, kwemakore ese aripo, paive nenyaya dzakasiyana dzakabatana nekwakatangira.
Kwakatangira Chess muIndia
Nyaya yekutanga yakataurwa kutenderera pasirese inoitika mu India. Paive nekataundi kanonzi Taligana, uye ndiye oga mwanakomana wemhare Rajah akafa muhondo yeropa.
Iye Rajah akawira mukuora mwoyo uye haana kuzombokwanisa kukunda kurasikirwa nemwanakomana wake. Dambudziko hombe nderekuti rajah haana kungofa zvishoma nezvishoma, asi akaregeredza humambo hwake. Yakanga ichingova nyaya yenguva humambo husati hwawa zvachose.
Kuona kudonha kwehumambo, brahmin anonzi Lahur Sessa, nerimwe zuva akaenda kuna mambo ndokumuratidza bhodhi raive nemazana matanhatu emativi, matema nemachena, pamusoro pezvidimbu zvakamiririra zvakatendeka mauto euto rake, vafambi, vatasvi vemabhiza, matangi, vatyairi venzou, mukuru vizier naRajah iye.
Iye mupirisita akaudza rajah kuti mutambo wakadai unogona kudzikamisa mweya wake uye kuti zvaizopodza kushushikana.. Muchokwadi, chero izvo zvakataurwa naBrahman zvaitika, Rajah akatonga humambo hwake zvakare, achibvisa dambudziko kubva munzira yake.
Izvo zvaisatsanangurika kuti zvese zvakaitika sei, riine bhodhi rimwe chete nezvidimbu zvine basa rekubvisa kusuwa kwerajah. Semubairo, iyo brahmin yakapihwa mukana wekukumbira zvaaida. Pakutanga, akaramba chikumbiro chakadai, sezvo aifunga kuti haana kukodzera kupihwa kwakadai, asi nekusimbirira kwaRajah, akaita chikumbiro chakareruka.
Iyo brahmin yakangokumbira tsanga yegorosi kune yekutanga square pane bhodhi, zviviri zvechipiri, ina yechitatu, sere yechina uye zvichingodaro kusvika furemu yekupedzisira. Rajah akashamiswa neive naivete wechikumbiro.
Nekudaro, iyo yekuzvininipisa chikumbiro cheBrahmin yakanga isina kuzvininipisa. Mushure mekuita dzakasiyana siyana dzekuti gorosi yaizomupa sei, vakaona kuti zvaizotora goho rese rehumambo kwemakore anoshamisa zviuru zviviri kuzadzisa chikumbiro chemupristi.
Akafadzwa nehungwaru hwaBrahmin, rajah akamukoka kuti ave mukuru vizier (mhando yegurukota, chipangamazano kuna rajah) wehumambo, uye Sessa akamuregerera chikwereti chake chikuru kugorosi.
Muchokwadi, izvo izvo brahmin yakapa kuna rajah yanga isiri iyo mutambo wechess, yaive chaturanga, imwe yemhando dzakasiyana dzemutambo wemazuva ano wechess.
Imwe mukana mukuru unouya mune dzakasiyana ngano nezvekwakabva chess ndeyekuti Ares, Mwari wehondo, angadai akagadzira bhodhi kuti aedze maitiro ake ehondo .
Nekudaro, chidimbu chimwe nechimwe chebhodhi chakamiririra chikamu chemauto ake, uye zvakazodaro, kudzamara Ares ave nemwanakomana anofa, ndokumupfuudzira izvo zvakakosha zvemutambo. Shure kwaizvozvo, mutambo uyu ungadai wakasvika kune ruzivo rwevanhu vanofa.
Evhangeri yeChess mu Nhoroondo
Zvinozivikanwa izvozvo pakati pe1450 kusvika zviuru gumi, chess yakatanga kuve neshanduko dzinooneka maererano nezvatinoziva nhasi. Yakanga iri panguva iyi apo zvidimbu zvakasiyana zvakawana mafambiro atinoziva nhasi, hongu, ese mafambiro nezvidimbu zvichibva kuChaturanga.
The elephant (iye akafanotungamira bhishopi wazvino) aigona kungofamba mumashure maviri akasangana. Iyo vizier (iye akafanotangira mambokadzi) ingori imba pane iyo diagonals. Vanofamba netsoka vakatadza kufambisa zvikwere zviviri pakufamba kwavo kwekutanga uye castling yanga isati yavepo. Pawns ivo vaigona chete kukwidziridzwa kuva vizier, uyo aive chidimbu chisina kusimba, mushure meiyo pawn, nekuda kwekufamba kwavo kushoma.
Mitemo yechess yatinoziva nhasi yakatanga kugadzirwa 1475, hauna chokwadi chekuti kwakatanga kupi uku. Vamwe vanyori venhau dzakaitika vanosiyana pakati Spain neItaly.
Yakanga iri panguva iyi apo vanofamba netsoka vakawana kufamba kwatinoziva nhasi, uko kunosanganisira kufambisa zvikwere zviviri pakufamba kwavo kwekutanga uye kutora vamwe vafambi kubva pasa .
Panguva iyoyo, mafambiro matsva eiyo mabhishopi uye mambokadzi ivo zvakare vakatsanangurwa uye, zvakanyanya kukosha, mambokadzi akazove chikamu chakakosha kwazvo mumutambo, achive iye chete anokwanisa kufamba chero kupi nekuenda kumberi kana kumashure senzira dzakawanda sezvaaida.
Iko kufamba kwezvimwe zvidimbu, pamwe chete nemimwe mirawo yakatekeshera chess yese, yakango shandurwa zviri pamutemo pakati pezana ramakore. XIX, uye mitemo iyi ichiripo nanhasi.
Kune avo vanotamba chess sekuvaraidza, kana kune vanhuwo zvavo mumutambo, chess machisi anogara achitamba pakati pevatambi vaviri pane rimwe bhodhi.
Nekudaro, mumutambo uyu, machisi haagari achiitika nenzira iyi, uye kune mamwe maitiro kupfuura iwe aunogona kufungidzira pakutanga kuona. Kutanga nehurefu hwemutambo, iyo inogona kutangira kubva pamaminetsi mashoma kusvika maawa kana kunyangwe mazuva ekuziviswa pamusoro, dzimwe nguva pasina kana mutambi achiuraya.
Iyo mitambo inotambwa nenyanzvi dzinowanzo gara dzichishandisa wachi dzinodzora nguva yemutambi wega wega. Mune zvimwe zviitiko mutambi anogona kutamba achipesana nevapikisi vanopfuura mumwe pamabhodhi akasiyana. Matafura haagare akaenzana uye kune chess modalities anosvika pamakumi matatu nematatu zvidimbu. Unogona kutamba chess usingaone bhodhi!
Iye zvino tichaona iyo dzakasiyana chess modalities uye yakawanda mikana yekuita uyu mutambo unakidze uye unetse.
Kirasi Chess Mutambo
Ndiyo yechinyakare chess modhi, umo vatambi vanosangana vakatarisana pamberi pebhodhi.
Iyo ndiyo nzira iyo vatambi vanoshandisa nayo makomputa akabatana neInternet kana pasocial network, uchitevera mirau yakafanana neiyo chinyakare chess.
Iko kusiana kwetsika chess mune iyo 15 miniti yakanyanya nguva muganho kune mumwe mutambi. Mune ino modhi, vatambi vehunyanzvi havafanirwe kunyora pasi mabidi avo.
Panguva imwe chete Chess Game
Mumutambo mumwechete wechess, mutambi wechess anotamba achipesana nevapikisi vanopfuura mumwe pamabhodhi akasiyana.
Mune ino modhi mutambi haaiti ona bhodhiPamwe nekushandisa vending kana kunyangwe mune yega kamuri. Mapofu machisa Izvo zvinoenderana nendangariro yemutambo wechess, uyo anofanirwa kushongedza chinzvimbo chebhodhi uye kuita ongororo yake yepfungwa.
El tsamba yepositi kana tsamba, sekuzivikanwa kwayo, iri chess modhi yaidzidziswa kure, nemutsamba. Pakutanga, vatambi ve chess vaitumira zvavanopa kuburikidza netsamba kana mapositikadhi, asi nekufamba kwenguva pamwe nekufambira mberi kwetekinoroji, mazuva ano zvinokwanisika kushandisa mae-mail, zvichideredza nguva yekumirira mhinduro.
Iko kunzi kweiyi modhi kwakasiyana neyechinyakare chess notations, kunyanya nekuti inoitwa nevanhu vanobva kumativi ese epasi, vatauri vemitauro yakati wandei. Epistolary chess ine yayo yega mubatanidzwa wenyika dzepasi rose(ICCF).
Yepamutemo Chess Mitemo
MITAMBO INOKOSHA YEMUTAMBO
1. Zvinangwa zvemutambo wechess.
1.1 Mutambo wechess unoridzwa pakati pevadzivisi vaviri vanomhanyisa zvidimbu pabhodhi rekwere inonzi 'chess board'. Iye mutambi ane zvidimbu zvichena anotanga mutambo. Mutambi anonzi 'ane nguva yekutamba' kana danho remupikisi raitwa. (Ona Chinyorwa 6.7)
1.2 Chinangwa chemutambi wega wega ndeche kuisa mambo wemupikisi 'pasi pekurwiswa' nenzira yekuti mupikisi asafambe zviri pamutemo. Mutambi anozadzisa chinangwa ichi anonzi anouraya mambo wemupikisi uye ahwina mutambo. Hazvitenderwe kusiya kana kuisa mambo wako akarwiswa, kana kubata mambo wemupikisi. Anopikisa uyo mambo wake aiongorora akarasa mutambo.
1.3 Mutambo ndewe tai kana zvichikonzera chinzvimbo kupi hapana mutambi ane mukana wekutarisa.
2. Pakutanga nzvimbo yezvidimbu zviri pabhodhi.
2.1 Iyo chessboard inoumbwa netiweki ye 8 × 8 ine 64 makwere neimwe mwenje yakaenzana (zvikwere 'vachena') uye nerima (zvikwere'vatema').
Bhodhi inoiswa pakati pevatambi nenzira yekuti iyo mativi pakona kurudyi kwemutambi wega wega chena.
2.2 Pakutanga kwemutambo, mutambi ane gumi nematanhatu akajeka mavara (iwo "machena" zvidimbu); imwe ine zvidimbu zvine gumi nezvitema zvakasviba (zvidimbu zvidema "):
Izvi zvikamu zvinotevera:
Mambo muchena, kazhinji inoratidzwa nechiratidzo.
Mukadzi muchena, inoratidzwa nechiratidzo.
Shongwe mbiri chena, inoratidzwa nechiratidzo.
Mabhishopi maviri machena, inoratidzwa nechiratidzo.
Mabhiza maviri machena, inoratidzwa nechiratidzo.
Masere masere machena pawns, inoratidzwa nechiratidzo.
Mambo mutema, inoratidzwa nechiratidzo.
Mukadzi mutema, inoratidzwa nechiratidzo.
Mabhishopi maviri matema, inoratidzwa nechiratidzo.
Mabhiza maviri matema, inoratidzwa nechiratidzo.
2.3 Nzvimbo yekutanga yezvidimbu pabhodhi ndeinotevera:
2.4 Idzo dzimba sere dzakarongedzwa kumeso dzinodaidzwa kunzi 'makoramu' Idzo dzimba sere dzakarongedzwa nechepamusoro dzinodaidzwa kunzi 'mitsara'. Iyo yakatwasuka mutsara wezvikwere zvemuvara wakafanana, uchifamba kubva kune mumwe mugumo webhodhi kuenda kune iri padyo neumwe, unonzi 'diagonal'.
3. Kufamba kwezvidimbu.
3.1 Hazvibvumirwi kufambisa chidimbu kukwereketi yakatogarwa nechimwe chidimbu chevara rimwe chete. Kana chidimbu chikaendeswa kukwereketi yatogara nechidimbu chemupikisi, iyo yekupedzisira inobatwa ibviswe mubhodhi sechikamu chekufamba kumwe chete. Chidimbu chinonzi chiri kurwisa chimedu chemupikisi kana chichigona kutora pakona, zvinoenderana nezvinyorwa 3.2 kusvika
Chidimbu chinofungidzirwa kurwisa chikwere, kunyangwe kana iyo square yakatadziswa kuenda kune ichi chiwere, nekuti zvaizosiya zvakadaro kana kuisa mambo wayo varwiswe.
3.2 Bhishopi anokwanisa kuenda kune chero sikweya padhuze ne diagonal.
3.3 Bhishopi anogona kutamira kune chero sikweya padhuze nefaira kana mutsara wairi.
3.4 Mambokadzi anogona kutamira kune chero sikweya padhuze nefaira, mutsara, kana diagonal iripo.
3.5 Kana vachiita kufamba uku, bhishopi, rook kana mambokadzi havagone kusvetuka pamusoro pezvimwe zvidimbu munzira yavo.
3.6 Bhiza rinogona kufamba kune imwe yemakwere padyo neyairo. Ziva kuti iyo mraba iyo iyo knight inogona kutamira kwairi haisi mune imwechete kholamu, mutsara, kana diagonal.
3.7 ku. Iyo pawn inogona kuendeswa kukwere, pakarepo pamberi payo, pane imwechete faira, iyo isingagare, kana
3.7.1 Pakufamba kwaro kwekutanga, pawn inogona kufamba sezvakataurwa muna 3.7.a; neimwe nzira, iwe unogona kufambisa dzimba mbiri mukoramu imwechete, chero ivo vari vaviri vasina kugarwa, kana
3.7.2 Iyo pawn inogona kuenda kukwere inogara chidimbu chemupikisi, chiri diagonally pamberi payo, mune faira riri pedyo, ichitora chidimbu ichocho.
3.7.3 Pawn inorwisa chikwere chakayambuka nepawundi remupikisi iyo ichangotungamira zvikwere zviviri mukufamba kamwe chete kubva pachiyero chayo chepakutanga, inogona kutora iyi pawn inopesana sekunge yaingotamisa sikweya imwechete.
Kubata uku kunogona kuitwa chete pakufamba ipapo mushure mekuburitsa kwambotaurwa uye kunodaidzwa kunzi 'en passant' socket.
3.7.4. Kana iyo pawn yasvika padanho repamusoro pehukama nenzvimbo yayo yekutanga, inofanirwa kuchinjaniswa sechikamu chekufamba kumwechete pachivara chimwe chemambokadzi, rook, bhishopi, kana knight yemuvara wakafanana nepawoni. Sarudzo yemutambi haina kuganhurirwa kuzvidimbu zvakatobatwa mumutambo.
Uku kuchinjaniswa kwepamberi kwechimwe chidimbu kunonzi 'kusimudzira' uye chiito chechimedu chitsva chiriporipocho.
3.8 Pane nzira mbiri dzakasiyana dzekufambisa mambo: fambisa mambo kuenda kune chero imba yekuvakidzana isingarwiswe nechimwe chete kana zvidimbu zvemupikisi.
Inogona zvakare kuve kuburikidza 'kusvetuka'. Uku kufambisa kunoitwa namambo uye imwe yema rook, eruvara rwakafanana pamutsara wekutanga wemutambi, inofungidzirwa samambo mumwechete achifamba uye akaurayiwa nenzira inotevera: mambo anotamiswa kubva kuimba yake yekutanga kuenda dzimba mbiri dzakanangana neshongwe iri mumba make yepakutanga, ipapo shongwe inoendeswa kuimba iyo mambo achangoyambuka.
(1) Kodzero yekuburitsa:
kana mambo atotamiswa, kana
neshongwe yatotamiswa kare
(2) Kukanda hakubvumidzwe kwenguva pfupi:
kana nzvimbo inogara mambo, kana nzvimbo yaanofanira kupfuura, kana nharaunda yaachagara, ikarwiswa nechimwe kana zvimwe zvezvidimbu zvemupikisi, kana
kana paine chero chidimbu pakati pamambo ne rook yekukanda nayo.
3.9 Mambo anonzi ari pasi pehutongi kana akarwiswa nechidimbu chimwe chete kana zvinopfuura zvemupikisi, kunyangwe zvidimbu zvacho zvakanamatira, ndiko kuti, vanotadziswa kubuda mumba iyoyo, nekuti vangazosiya kana kuisa mambo wavo pasi pesimba.
Hapana chidimbu chinogona kufamba nenzira inoburitsa kana kusiira mambo wayo ari pasi pesimba.
4. Chiito chekufambisa zvidimbu.
4.1 Kufamba kwega kwega kunofanirwa kuitwa neruoko rumwe.
4.2 Chero bedzi achitaura chinangwa chake pamberi (semuenzaniso, achiti ini ndinowana "j'adoube" kana "Ini ndinogadzirisa"), mutambi ane mukana wekutamba anogona kuwana chidimbu chimwe kana zvimwe mudzimba dzake.
4.3 Kunze kwekunge zvapihwa muChinyorwa 4.2, kana mutambi ane mukana wekutamba wabata
nemaune chimwe kana zvimwe zvidimbu zvake pabhodhi, anofanira kutamba chidimbu chekutanga chakabatwa chinogona kufambiswa, kana
chimwe kana zvimwe zvezvidimbu zvemupikisi wake, anofanira kutora chikamu chekutanga chakabatwa, chinogona kutorwa, kana
Chikamu chimwe chemuvara wega wega, anofanirwa kutora chidimbu chemupikisi nechidimbu chake kana, kana izvi zvisiri pamutemo, fambisa kana kutora chidimbu chekutanga chakabatwa chinogona kutambwa kana kutorwa. Kana zvisina kujeka kuti chidimbu chakambotambwa kare, chidimbu chemutambi chinofanirwa kutarisirwa kunge chakatambwa pamberi pemupikisi wake.
4.4 Kana mutambi achitendeuka:
nemaune bata mambo wako uye rook rinofanira kukanda pabapiro iri kana kufamba kuri pamutemo.
nemaune anobata rook uyezve mambo wake, haatenderwe kukanda bapiro iri mukufamba uku uye mamiriro acho anofanira kutongwa nechinyorwa 4.3.a
Nechinangwa chekukanda, chinobata mambo kana mambo uye rook panguva imwechete, asi kukanda kudivi iri hazvisi pamutemo, mutambi anofanirwa kuita imwe danho repamutemo namambo wavo (izvo zvinogona kusanganisira kukanda kune rimwe divi). Kana mambo asina danho repamutemo, mutambi akasununguka kuita chero danho repamutemo.
inosimudzira pawn, sarudzo yechidimbu inopedziswa chete kana chidimbu chabata nzvimbo yekusimudzira.
Kana pasina chimwe chezvimedu zvakabatwa chingafambiswe kana kubatwa, mutambi anogona kuita chero danho repamutemo.
Kana chidimbu chikawira pamusoro pemba, semhedzisiro yekufamba zviri pamutemo kana chikamu chekufamba zviri pamutemo, hachigone kuendeswa kune imwe imba pakufamba uku. Iko kufamba kunofungidzirwa kwakapedzwa:
mune yekubatwa, kana chidimbu chakatorwa chabviswa mubhodhi uye mutambi, mushure mekuisa chidimbu chake pachivara chitsva, aburitsa chidimbu chakatorwa kubva muruoko rwake;
mune yekukanda, kana mutambi asunungura rook kubva muruoko rwake pachivara chakayambuka namambo. Kana mutambi achinge asunungura mambo kubva muruoko, danho harizoitwe, asi mutambi haasisina mvumo yekuita chero danho kunze kwenzvimbo yepamusoro papapiro iro, kana izvi zviri pamutemo;
mune yekusimudzira pawn, apo pawn yabviswa mubhodhi uye ruoko rwemutambi rwaburitsa chidimbu chitsva mushure mekuchiisa pane yekusimudzira nzvimbo. Kana mutambi atoburitsa pawn yakasvika mubhokisi rekusimudzira reruoko rwake, kufamba kwacho hakusati kwaitwa, asi mutambi haasisina mvumo yekutamba
anofamba netsoka kuenda kune imwe imba.
Chiyero chinofungidzirwa zviri pamutemo kana zvese zvinodiwa muChinyorwa 3. zvikaitika.Kana danho risiri repamutemo, kumwe kumhan'ara kwepamutemo kunofanirwa kuitwa sezvakataurwa muChitsauko 4.5
4.7 Mutambi anorasikirwa nekodzero yekunyunyuta nezve kutyorwa kwechinyorwa 4 nemupikisi, kubva panguva yaanobata chidimbu nemaune.
5. Kupera kwekuenda
5.1 Mutambo unokundwa nemutambi anotonga mambo wemupikisi. Izvi zvinobva zvangopedza mutambo, chero danho rinoburitsa chinzvimbo chekutarisa chiri pamutemo.
Kana mutambo wacho wakakundwa nemutambi ane muvengi anozivisa kuti aenda. Izvi zvinobva zvangopera mutambo.
5.2 Mutambo unodhonzwa apo mutambi anotora mukana haana danho repamutemo uye mambo wake haasi pasi pekutonga. Mutambo uyu unonzi wakapera namambo "vakanyura." Izvi zvinobva zvangopedza mutambo sekureba sekufamba uko kwakaburitsa nzvimbo yekutengesa zviri pamutemo.
mutambo unodhonzwa kana chinzvimbo chikaonekwa umo pasina mutambi anogona kutarisa mambo wemupikisi kuburikidza nhevedzano yekufamba kwepamutemo. Mutambo wacho unonzi wakapera "munzvimbo yekufa." Izvi zvinobva zvangopedza mutambo sekureba sekufamba kunogadzira chinzvimbo kuri pamutemo (ona Chinyorwa 9.6)
Mutambo unoitika nekubvumirana pakati pevatambi panguva yemutambo. Izvi zvinobva zvangopera mutambo. (Ona Chinyorwa 9.1)
Mutambo unogona kutorwa kana yakafanana nzvimbo inoratidzika kana yakaonekwa pabhodhi kanokwana katatu. (Ona Chinyorwa 9.2)
Mutambo unogona kuve dhiri kana vatambi vaita yavo yekupedzisira makumi mashanu akateedzana kufamba pasina kufambisa chero pawns uye vasina kutora chero chavabata. (Ona Chinyorwa 50)
6. Chess wachi
6.1. 'Chess wachi' zvinoreva wachi ine mbiri nguva monitors, yakabatana nenzira yekuti mumwe chete wavo anogona kushanda panguva.
'Clock' muMitemo yeChess zvinoreva imwe yeaya maviri nguva monitors. Wachi imwe neimwe ine museve.
'Arrow donhwe' zvinoreva kupera kwenguva yakatarwa yemutambi.
6.2. Paunenge uchishandisa chess wachi, mutambi wega wega anofanira kuita shoma nhamba yekufamba kana kufamba kwese mune yakapihwa nguva yenguva uye / kana imwezve nguva ingagoverwa mushure mega kufamba. Zvese izvi zvinofanirwa kutsanangurwa pachine nguva.
Iyo nguva yakachengetedzwa nemutambi panguva imwe inowedzerwa kunguva yenguva inotevera, kunze kwekunge iri "nguva kunonoka" maitiro.
Mune mamiriro e "nguva kunonoka", Vatambi vese vari vaviri vanopihwa imwe 'huru yekufunga nguva'. Mutambi wega wega anogamuchira "yakatarwa yekuwedzera imwe nguva" nekufamba kwese. Iyo huru yekuverenga nguva inotanga chete mushure mekunge yakatarwa nguva yapfuura. Chero bedzi mutambi achimisa wachi yake "nguva yakatarwa" isati yapera, "nguva huru" haichinje, zvisinei nehuwandu hwe "nguva yakatarwa" yakashandiswa.
6.3 Pakarepo mushure mekudonha kwemuseve, izvo zvinodiwa muChinyorwa 6.2 zvinofanirwa kusimbiswa.
6.4 Mutambo usati watanga, zviri kumureferi kusarudza kuti wachi yakaiswa kupi.
6.5 Iyo wachi yemutambi ine zvidimbu zvichena inofanira kutanga panguva yakatarwa kutanga kwemutambo.
6.6 Chero mutambi anosvika pabhodhi mushure mekutanga kwechikamu acharasikirwa nemutambo. Naizvozvo, iyo lag nguva ndeye zero maminetsi. Mitemo yemakwikwi inogona kudoma neimwe nzira.
Kana iyo mitemo yemakwikwi inotsanangura imwe nguva yekusavapo, zvinotevera zvinoshanda:
Kana pasina mumwe wevatambi akasvika panguva yekutanga, mutambi ane zvidimbu zvichena anofanirwa kurasikirwa nenguva yese yakapfuura asati asvika, kunze kwekunge mirau yemakwikwi yatsanangura kana mupomeri afunga neimwe nzira.
6.7 Munguva yemutambo, mutambi mumwe nemumwe, mushure mekufamba kwake mubhodhi, anofanira kumisa wachi yake otanga wachi yemuvengi. Mutambi anofanirwa kugara achibvumidzwa kuisa pini pawachi yake. Kufamba kwako hakufungidzirwe kwakakwana kusvikira iwe wazviita, kunze kwekunge kufamba kwapera mutambo (ona Zvinyorwa 5.1.a, 5.2.a, 5.2.b, 5.2.c uye 9.6).
Iyo nguva iri pakati pekuita kufamba mubhodhi nekumisa iyo pachayo, pamwe nekutangisa wachi yemupikisi, inoonekwa sechikamu chenguva yakapihwa mutambi.
Iye mutambi anofanira kumisa wachi yake neruoko rumwe chete rwaakange achiita kufamba kwake. Kuchengeta ruoko rwako papini yekutarisa kana kuyengerera pamusoro payo kunorambidzwa.
Vatambi vanofanirwa kubata chess wachi nemazvo. Izvo zvinorambidzwa kuishandisa nesimba rakawandisa, kuibata kana kuidonhedza. Kushandiswa kusiriko kwewachi kucharangwa zvinoenderana neChinyorwa 13.4.
Kana mutambi asingakwanise kushandisa wachi, anofanirwa kupa mubatsiri kuti aite basa iri, nerutsigiro rwemuridzi. Wachi yako inofanira kusetwa nemuperefiti nenzira yakanaka.
Museve unofungidzirwa kuti wadonha kana muridzi wepembe achiona chokwadi kana mumwe wevatambi apa chirevo chakakodzera nezvazvo.
Kunze kwekunge imwe yezvipo zviri muZvinyorwa 5.1.a, 5.1.b, 5.2.a, 5.2.b, 5.2.c zvinoshanda, mutambi anorasikirwa nenhamba yakatarwa yekufamba munguva acharasikirwa nemutambo. Nekudaro, mutambo unodhonzwa kana chinzvimbo chasvika panokwikwidzwa apo mupikisi asingakwanise kutarisa mambo wemupikisi kuburikidza nhevedzano yezvinogona kuitika pamutemo.
Iyo. Chero chiratidzo chinopihwa nemawachi chichafungidzirwa kuva chechokwadi mukushayikwa kwechikanganiso chiri pachena. Chero ipi chess wachi ine huso hwakajeka inofanira kuchinjwa. Refereti anofanira kutsiva wachi uye kushandisa njere pakuseta nguva dzinofanirwa kuratidzwa nemaoko ewachi inozotsiva yakaremara.
EHE. Kana panguva yemutambo zvikaonekwa kuti marongero eawa rimwe kana ese ari maviri aive asiri iwo, mutambi kana muridzi wepembe anofanira kumisa mawachi ipapo. Mutambi anofanira kururamisa nguva dzekupfura neyakaipfura. Mutambi anofanira kushandisa kutonga kwake kwakanyanya kuti aone mutemo wakakodzera.
6.8 Kana miseve yese ikadonha uye zvisingaite kuona kuti ndeupi wadonha kutanga:
mutambo uchaenderera mberi kana izvi zvikaitika mune chero nguva yemutambo, kunze kwekupedzisira nguva.
mutambo unodhonzwa kana ukaitika panguva yemutambo, apo zvese zvasara zvinofanirwa kupedzwa.
6.9 Kana mutambo uchida kumiswa, mutambi anofanirwa kumisa wachi.
Mutambi anogona chete kumisa wachi kuti atsvage rubatsiro rwemurengeti, semuenzaniso kana kukwidziridzwa kuchiitika uye chidimbu chinodiwa chisipo.
Mutambi anofanira kusarudza kuti mutambo unofanira kutangwazve chero zvodii.
Kana mutambi akamisa wachi kuti atsvage rubatsiro kubva kumutambi, muridzi anofanirwa kuona kana mutambi aine chero chikonzero chakamunakira. Kana zviri pachena kuti pakanga pasina chikonzero chechokwadi chekumisa wachi, mutambi acharangwa zvinoenderana nechinyorwa 13.4
6.10 Kana kukanganiswa kukaitika uye / kana zvidimbu zvikatsiviwa munzvimbo yapfuura, muridzi wepembe anofanira kushandisa mutongo wake wakanakisa kuona nguva dzinowanikwa mumaawa. Refereti anofanirwa zvakare, kana zvichidikanwa, kugadzirisa huwandu hwekufamba achidzokera kumashure.
6.11 Muimba yemutambo: masikirini, monitors kana madziro emabhodhi anotenderwa, ayo anoratidza pari zvino bhodhi, mafambiro uye huwandu hwemafambiro akaitwa, uye mawachi anoratidzawo huwandu hwekufamba. Nekudaro, mutambi haakwanise kuita chero zvirevo zvinoenderana chete neruzivo rwunoratidzwa nenzira iyi.
7.1 Kana panguva yemutambo ikazoonekwa kuti nzvimbo yekutanga yezvidimbu yakanga isiriyo, mutambo uchadzimwa uye mutambo mutsva uchatambwa.
Kana, panguva yemutambo, zvinoita sekunge bhodhi rakaiswa zvinopesana nezvakatemwa muChinyorwa 2.1, mutambo unoenderera, asi chinzvimbo chakatotambwa chinofanirwa kuendeswa kubhodhi rakaiswa nenzira kwayo.
7.2 Kana mutambo watanga nemavara akadzorerwa, inofanirwa kuenderera kunze kwekunge muridzi afunga neimwe nzira.
Kana mutambi achifambisa chidimbu chimwe chete kana zvimwe, anofanira kudzorera chinzvimbo chakakodzera munguva yake. Kana zvichidikanwa, mutambi kana anopikisa anogona kumisa wachi ndokufonera mutambi. Mutambi anogona kuranga mutambi akafambisa zvidimbu.
7.3 Kana, panguva yemutambo, zvikazoonekwa kuti kufamba zvisiri pamutemo kwapera, kusanganisira kukundikana mutsika yekusimudzira pawn kana kutora mambo wemupikisi, chinzvimbo chiripo chisati chaitika chisina kufanira chinofanira kumiswazve. Kana chinzvimbo icho chisingakwanisike kugadziriswazve, mutambo unofanirwa kuenderera kubva pekupedzisira unozivikanwa chinzvimbo, pamberi pekusarongeka. Maawa anofanirwa kumisikidzwa zvinoenderana neChinyorwa 6.13. Zvinyorwa 4.3 na4.6 zvinoshanda pakufamba kunoitwa panzvimbo pekufamba zvisiri pamutemo. Mutambo unofanirwa kuenderera kubva panzvimbo yakadzoreredzwa.
Kana mushure mekutora zviito zvinotsanangurwa muChinyorwa 7.4.a, pamatanho maviri ekutanga asiri pamutemo nemutambi, muridzi anofanirwa kupa anopikisa maminetsi maviri ekuwedzera mune imwe neimwe nguva kune wechitatu kufamba zvisiri pamutemo nemutambi mumwe chete, muridzi wepembe anofanira kuzivisa mutambo warasika wemutambi uya
Nekudaro, mutambo unodhonzwa kana chinzvimbo chasvika panokwikwidzwa apo mupikisi asingakwanise kutarisa mambo wemupikisi kuburikidza nhevedzano yezvinogona kuitika pamutemo.
7.4 Kana, panguva yemutambo, zvidimbu zvakawanikwa zvofamba kubva kudzimba dzavo, chinzvimbo ipapo pamberi pechikanganiso chinofanira kudzoreredzwa. Kana chinzvimbo chakatangira iko kusagadzikana chikatadza kutsanangurwa, mutambo uchaenderera uchibva pachinzvimbo chekupedzisira chinozivikanwa pasati paitika kusarongeka. Maawa anofanirwa kumisikidzwa zvinoenderana neChinyorwa 6.13. Mutambo unofanirwa kuenderera kubva panzvimbo yakadzoreredzwa.
8. Chirevo chezvipo
8.1 Munguva yemutambo, mutambi wega wega anodikanwa kuti anyore pa 'spreadsheet' yakatemerwa makwikwi, mune algebraic notation (Ona Appendikisi C), mafambiro ake neavo vemuvengi, nenzira kwayo, fambisa kufamba, nenzira zvakajeka uye zvinonzwisisika sezvinobvira. Izvo zvinorambidzwa kunyora rally usati waigadzira pabhodhi, kunze kwekunge tai ichinzi iri pasi peZvinyorwa 9.2, 9.3, kana mutambo wakadzoserwa zvichiteerana neChinyorwa 1.a. yeDareferred Departure Guidelines.
Mutambi anogona kupindura danho remupikisi asati anyora, kana vachida.
Iwe unofanirwa kunyora yako yapfuura kupa usati wagadzira imwe imwe.
Vatambi vaviri ava vanofanirwa kupinda kupihwa dhirowa paspredishiti (Ona Appendikisi C.13).
Kana mutambi asingakwanise kuwana zvibodzwa, mubatsiri, uyo anogona kupihwa nemutambi uye agamuchirwa nemurengeti, achaita mafambiro. Wachi yake inofanirwa kuve yakarongedzwa nemutengesi.
8.2 Munguva yemutambo, pepa rekuparadzira rinofanira kugara richionekwa kumurairidzi.
8.3 Iwo maspredishiti imari yevagadziri vezviitiko.
8.4 Kana mutambi aine maminitsi asingasviki mashanu pawachi yake chero nguva panguva yemutambo uye asingagamuchire imwe nguva yemasekonzi makumi matatu kana kudarika mushure mekufamba kwese, kune yasara nguva yaasina kusungirwa kuita zvinodiwa nemutambo. Chikamu 30. Pakarepo mushure meimwe yeiyo 'miseve' yadonha, mutambi anofanirwa kugadzirisa pepa rake rebasa asati aendesa chidimbu pabhodhi.
8.5 Kana pasina mutambi anodikanwa kuti awane zvibodzwa, zvinoenderana nechinyorwa 8.4, muridzi wepembe kana mubatsiri anofanira kuedza kupupurira nekurekodha mafambiro. Mune ino kesi, pakarepo mushure mekunge museve wadonha, muridzi anofanirwa kumisa wachi. Ipapo vese vatambi vanofanirwa kugadzirisa mamaki avo, vachishandisa murairidzi kana anopikisa.
Kana chete mutambi mumwe chete achidikanwa kuti anyore, zvinoenderana nezvakapihwa muChinyorwa 8.4, kana imwe chete yemiseve yadonha, anofanirwa kugadzirisa pepa rake rekushandira asati aendesa chidimbu pabhodhi. Chero bedzi iri nguva yako yekufamba, mutambi anogona kushandisa pepanhau remupikisi, asi anofanira kuidzorera asati aenda.
Kana pepa rakakwana risingawanikwi, vatambi vanofanirwa kuumbazve mutambo pane imwe bhodhi, pasi pekutarisirwa kwemuridzi kana mubatsiri. Mutambo wemutambo usati watanga, muridzi wepembe achatarisa pasi pari zvino mutambo, nguva uye nhamba yekufamba kunoitwa, kana ruzivo urwu ruripo.
Kana iwo maspredishiti ari echinyakare uye achiratidza kuti mutambi apfuura muganho wenguva, danho rinotevera rinofanirwa kutarisirwa sekutanga renguva inotevera nguva, kunze kwekunge paine humbowo hwekuti mamwe mafambiro akaitwa.
Mushure memutambo, vese vatambi vanofanirwa kusaina mapepa ekushandira, zvichiratidza mhedzisiro yemutambo. Kunyangwe kana zvisiri izvo, mhedzisiro iyi inomira, kunze kwekunge mupomeri afunga neimwe nzira.
9. Mitambo yakasungwa
9.1 Mitemo yemakwikwi inogona kudoma kuti vatambi havagone kubvumirana kusunga pasi peimwe nhamba yekufamba kana neimwe nzira, pasina mvumo yemurengeti.
9.2 Kana mitemo yemakwikwi ichibvumidza dhirowa nekubvumirana, zvinotevera zvinoshanda:
Mutambi uyo anoda kutaura kukanda anofanirwa kuzviita mushure mekuita kufamba kuri pabhodhi, asati amisa wachi uye kutanga wachi yemupikisi. Kupihwa chero imwe nguva panguva yemutambo kunoramba kuchishanda, asi Chinyorwa 12.6 chinofanira kucherechedzwa. Mamiriro ezvinhu haakwanise kuverengerwa muchirongwa. Muzviitiko zvese izvi, kupihwa kwacho hakugone kubviswa uye kunoramba kuri kwechokwadi kudzamara muvengi achizvigamuchira, achizviramba nemuromo, achizviramba nekubata chidimbu nechinangwa chekuchifambisa kana kuchikunda, kana kana mutambo uchinge wapera neimwe nzira.
Dhirowa dhizaini inofanirwa kucherechedzwa nevatambi vaviri pamaspredishiti avo vane chiratidzo (Ona Appendikisi C13).
Dhirowa yekudai inoenderana nezvinyorwa 9.2, 9.3 kana 10.2 ichaonekwa seyekupihwa kwekutora.
9.2 Mutambo unodhonzwa, mushure mekunyunyuta kwakaringana kubva kumutambi ane mukana wekutamba, kana ari munzvimbo imwechete, kanokwana katatu (kwete hazvo nekudzokorora kwekufamba)
yave kuda kuoneka, kana iwe ukatanga kunyora kufamba kwako paspredishiti uye wobva wazivisa kune wepereti chinangwa chako chekufamba, kana
achangobva kuoneka uye mutambi anoti tie ine mukana wekutamba.
Izvo zvinzvimbo zvinoenderana na (a) uye (b) zvinoonekwa zvakafanana, kana mutambi mumwe chete ane mukana, zvidimbu zverudzi rumwe chete uye nemuvara zvinogara munzvimbo imwechete, uye mukana wekufamba kwezvikamu zvese zvevatambi vaviri zviri zvimwe chete.
Izvo zvinzvimbo hazvina kufanana kana pawn ingadai yakatorwa 'en passant' haichakwanise kutorwa nenzira iyi. Kana mambo (kana rook) akamanikidzwa kufamba, anorasikirwa nekodzero yake yekukanda, kana iripo, chete mushure mekutamiswa.
9.3. Mutambo wacho wakasungwa, nekuda kwekunyunyuta kwakaringana kubva kumutambi ane mukana wekutamba, kana:
anonyora kufamba kwake papepa rake rekushandira uye achizivisa kumurairidzi chinangwa chake chekuita danho rake, izvo zvinokonzeresa makumi mashanu kufamba kunoitwa kune mumwe mutambi pasina kufamba kwechero pawn uye pasina kubatwa, kana
Iwo ekupedzisira makumi mashanu akateedzana kufamba akaitwa nevatambi vese, pasina kufamba kwechero pawns kana captures.
Kana mutambi akabata chidimbu zvichienderana nechinyorwa 4.3 asina kutora tie, anorasikirwa nekodzero yekuda, maererano nezvinyorwa 9.2 na9.3, pane izvozvi.
Kana mutambi akati tayi, zvinoenderana nezvinyorwa 9.2 na9.3, anogona kumisa wachi mbiri. (Ona Chinyorwa 6.12.b) Iwe haugone kubvisa chikumbiro
Kana chikumbiro chakatemwa kuve chakarurama, mutambo unodhonzwa nekukasira
Kana chikumbiro chakatemwa kunge chisiri icho, muridzi wepemba anofanira kuwedzera maminetsi matatu kune yakasara nguva yekuratidzira. Ipapo mutambo unofanirwa kuenderera. Kana chikumbiro chikaitwa pahwaro hwechipo chakarongwa, kupihwa uku kunofanirwa kuitwa zvichienderana nezvinowanikwa muChinyorwa 4.
9.4 Mutambo unodhonzwa kana chinzvimbo chasvika panotarisirwa pasingaonekwe nekuda kwechero zvingaite dzakateedzana zvemitemo. Izvi zvinobva zvangopedza mutambo sekureba sekufamba kunogadzira chinzvimbo ichi zviri pamutemo.
10. Kumhanyisa kupedza
10.1 Iyo 'yekumhanyisa kupera' chikamu chemutambo umo zvese (zvakasara) zvinofamba zvinofanirwa kuitwa mukati meimwe nguva muganho.
10.2 Kana mutambi, aine mukana wekutamba, aine maminetsi asingasviki maviri pawachi yake, anogona kutora tayi museve wake usati wadonha. Anofanirwa kudaidza muridzi uye anogona kumisa wachi (Ona Chinyorwa 6.12.b).
Kana mukwikwidzi akabvuma kuti mupikisi haasi kuita nhanho yekuhwina mutambo, nenzira dzakajairika, kana kuti mupikisi haakwanise kuhwina nenzira dzakajairika, anofanira kuzivisa tie. Zvikasadaro, iwe unofanirwa kumbosendeka yako sarudzo kana kuramba chichemo. Kana mukwikwidzi akadzosera sarudzo yake, anopikisa anogona kupihwa maminetsi maviri ekuwedzera uye kutamba kunofanirwa kuenderera mberi zvichikwanisika pamberi pemurengeti. Mutambi anofanira kuzivisa mhedzisiro yekupedzisira mumashure memutambo kana nekukurumidza sezvinobvira mushure mekunge museve wasvika Iwe unofanirwa kuzivisa tie kana iwe uchibvuma kuti iyo yekupedzisira chinzvimbo haigone kuhwina nenzira zvakajairwa, kana kuti iye anopikisa anga asiri kuita zvakakwana kuyedza kuhwina mutambo nenzira yakajairwa.
Kana mukwikwidzi akaramba izvo, anopikisa anofanira kuve nemaminetsi maviri ekuwedzera nguva.
Sarudzo yemutongi ichave yekupedzisira (pasina kukwidza) kwa (a), (b), (c).
11. Kunze kwekunge zvaziviswa kare, zvikasadaro, mutambi anokunda mutambo wavo, kana kuhwina neWO, anogamuchira poindi (1), mutambi anorasikirwa nemutambo wavo kana kurasikirwa neWO anogamuchira (0) pt uye mutambi uyo sunga mutambo wako unogashira zvibodzwa zvehafu yetindi (½)
12. Mutambi anoitisa.
12. 1 Vatambi havazokwanise kutora chero chiito chinokonzeresa yakaipa mukurumbira mumutambo wechess.
2 Vatambi vanogona kusasiya "nzvimbo yekutamba" vasina mvumo yemurengeti. Iyo nharaunda yemitambo ine yemutambo kamuri, dzimba dzekuzorora, nzvimbo yekudyira yakapusa, inochengeterwa vanhu vanoputa uye dzimwe nzvimbo dzakatarwa nemureferi. Mutambi, ane mukana wekutamba, haakwanise kusiya imba yekutamba asina mvumo yemuridzi.
12.2 Panguva yemutambo, vatambi vanorambidzwa kushandisa zvinyorwa, masosi eruzivo kana kurairwa, kana kuongorora pane rimwe bhodhi.
Pasina mvumo yemuridzi, mutambi anorambidzwa kutakura nharembozha kana imwe nzira yemagetsi yekutaurirana mukamuri yemutambo, kunze kwekunge yadimburwa zvachose. Kana chero cheizvi zvigadzirwa chaburitsa ruzha, mutambi anofanira kurasikirwa nemutambo. Mupikisi anofanira kukunda. Nekudaro, kana mukwikwidzi asingakwanise kuhwina mutambo kuburikidza nhevedzano yekufamba zviri pamutemo, zvibodzwa zvake zvinofanirwa kutariswa seti.
Kuputa kunotenderwa chete munzvimbo yakatarwa nemurengeti.
Iro spreadsheet rinongofanirwa kushandiswa kunyora mabidi, nguva dzewachi, bhidhi yetayi, zvinyorwa zvine chekuita nekunyunyuta, uye imwe data rakakodzera.
Vatambi vapedza mitambo yavo vanofanirwa kutariswa sevataridzi.
Izvo zvinorambidzwa kutsausa kana kukanganisa muvengi munzira ipi neipi. Izvi zvinosanganisira zvichemo zvisina musoro, zvinopihwa zve sweepstakes, kana kuratidzwa kwenzvimbo yeruzha munzvimbo yekutamba.
Kukanganiswa kwechimwe chikamu chezvinyorwa 12.1 kusvika 12.6 kuchapa mukana wekushandiswa kwezvirango zvakapihwa muchinyorwa 13.4.
12.3 Kuramba kunoramba kwemutambi kutevedzera Mitemo yeChess kunofanirwa kurangwa nekurasikirwa nemutambo. Mutambi anofanira kusarudza zvibodzwa zvemupikisi.
Kana vese vatambi vakawanikwa vaine mhosva pasi peChinyorwa 12.8, mutambo uchanzi wakarasika kune vese.
Panyaya yeunyanzvi. 10.2.d. kana Appendikisi D, mutambi haakwanise kukwikwidza achipokana nesarudzo yemurengeti.
Mune chero imwe nyaya, mutambi anogona kukwikwidza achipikisa chero sarudzo yemurengeti, kunze kwekunge mitemo yemakwikwi ichireva zvimwe.
13. Basa remurairidzi
13.1 Mutambi anofanira kuongorora kuti Mitemo yeChess inocherechedzwa zvakanyanya.
Mutambi anofanira kuita zvakanakira mukwikwidzi. Iwe unofanirwa kuona kuti pane nharaunda yakanaka yekutamba, kuitira kuti vatambi vasavhiringidzike. Iwe unofanirwa zvakare kuongorora kumhanya kwakanaka kwemakwikwi.
Mutambi anofanira kucherechedza mitambo, kunyanya kana vatambi vari panguva, anoteedzera sarudzo dzaakatora nekupa zvirango kuvatambi pazvinenge zvakakodzera.
13.2 Mupemperi anogona kunyorera imwe kana kupfuura pazvirango zvinotevera:
wedzera nguva yasara yemupikisi,
kuderedza nguva yasara yemutambi anotadza,
zivisa mutambo warasika,
- kudzora mapoinzi akawanikwa mumutambo nemutambi anotadza,
wedzera mapoinzi akawanikwa mumutambo nemupikisi kusvika pakukwanisika pamutambo iwoyo,
kudzingwa kubva muchiitiko
Mutambi anogona kupa mumwe kana vaviri vatambi nguva yekuwedzera kana paine bongozozo rekunze panguva yemutambo.
Mutambi haafanire kupindira mumutambo, kunze kwezviitiko zvakapihwa muMitemo ya
Chess. Iyo haifanire kuratidza huwandu hwekufamba kunoitwa, kunze kwekunge uchizadzisa izvo zvisungo zveChinyorwa 8.5, kana imwe yemiseve yadonha. Mutambi anofanira kurega kuzivisa mutambi kuti anopikisana naye afamba kana kuti mutambi haatange wachi yake.
Iyo. Vataridzi nevatambi vemimwe mitambo havafanirwe kutaura kana kupindira mutambo nenzira ipi neipi. Kana zvichidikanwa, mutambi anogona kudzinga vatadzi kubva munzvimbo yekutamba. Kana mumwe munhu akaona zvisina kufanira, ivo vanogona chete kuzivisa mutambi.
EHE. Kunze kwekunge kupihwa mvumo nemurengeti, zvinorambidzwa kuti chero munhu ashandise nharembozha kana chero nhare yekukurukurirana panzvimbo uye mune chero imwe nzvimbo inosanganisirwa nemutongi.
14.1 Mibatanidzwa yakabatana inogona kukumbira FIDE kuti ipe chisarudzo chepamutemo pazvinhu zvine chekuita neMitemo yeChess.
A. Kurumidza chess
A1 Mutambo we'Kurumidza Chess 'ndewekuti kufamba kwese kunofanirwa kuitwa mukati meyakagara yakatemwa maminetsi gumi neshanu, asi isingasvike maminetsi makumi matanhatu kune mumwe mutambi; kana iyo yakakosha nguva + makumi matanhatu nguva ipi neipi yekuwedzera inenge maminetsi gumi neshanu, asi isingasvike maminetsi makumi matanhatu kune mumwe mutambi
A2 Vatambi havafanirwe kunyora mutambo wemitambo.
A3 Kana paine tarisiro yakakwana yemutambo (semuenzaniso, mumwe muridzi weanokwana matatu emitambo) Mitemo Yemakwikwi inoitika.
A4 Kana manejimendi isina kukwana, Mitemo yeKukwikwidza inoshanda, kunze kwekunge ichitongwa neMitemo inotevera yeRapid Chess:
Kana mumwe mutambi achinge aenda katatu, hapana zvichemo zvinogona kuitwa maererano nekuiswa zvisirizvo kwezvikamu, kumiswa kwebhodhi, kana kuiswa kweawa. Panyaya yekuchinja chinzvimbo pakati pamambo namambokadzi, hazvitenderwe kukanda namambo uyu.
Mutambi anofanira kupindira zvinoenderana nezvakarayirwa neArt. 4 (Mutemo wekufambisa zvidimbu), chete kana zvichidikanwa nemumwe kana vaviri vatambi.
Kufamba zvisiri pamutemo kunopedzwa nekukurumidza panotanga wachi yemupikisi. Anopikisa ane mvumo yekureva kuti mutambi apedza kufamba zvisiri pamutemo, chero asina kuenda. Mushure menguva yekunyunyuta kwakadaro ndipo panofanirwa kupindirana. Zvisinei, kana madzimambo maviri ari pasi pehutongi kana kukwidziridzwa kwepamberi kusati kwapera, muridzi anofanirwa kupindira, kana zvichibvira.
1. Museve unofungidzirwa kuti wadonha kana mumwe wevatambi achitaura zvine mutsindo. Mutambi anofanira kurega kunongedzera kumuseve unodonha, asi anogona kupindira kana miseve yose ikawa.
A5 Kuti atore nguva kuhwina, mumhan'ari anofanira kumisa mawachi ese uye nekuzivisa mutambi.
Zvekuti kuda kubudirire, mushure mekunge mawachi amira, museve weanodaidzira unofanirwa kunge uri 'kumusoro' uye museve wemuvengi wake pasi mushure mekunge mawachi amira.
A6 Kana miseve miviri ikaburitswa sezvakatsanangurwa mu (1) na (2), muridzi wepembe anofanira kuzivisa mutambo kuti uve tie.
B1 Iyo 'mheni bhaudhi' mutambo ndeimwe umo kufamba kwese kunofanirwa kuitwa mukati meyakafanorongwa nguva muganho wemaminitsi asingasviki gumi nemashanu kune mumwe mutambi; kana iyo yakakosha nguva + makumi matanhatu nguva ipi neipi yekuwedzera iri pasi pemaminitsi gumi nemashanu.
B2 Kana paine manejimendi akakwana emutambo (mukwikwidzi mumwe kumutambo wega wega), Mitemo Yemakwikwi uye nezvinopihwa neChinyorwa A2 zvinoshanda.
B3 Kana manejimendi isina kukwana, zvinotevera zvinofanirwa kushanda.
Mitambo ichatongwa neMitemo yeRapid Chess sezvakapihwa muwedzero A, kunze kwekunge ichitongwa neMitemo yeMheni inotevera.
Zvinyorwa 10.2 neA4c hazvishande.
Kufamba zvisiri pamutemo kunopedzwa nekukurumidza panotanga wachi yemupikisi. Asati aenda zvake, anopikisana ane mvumo yekukunda kukunda. Nekudaro, mutambi ane mvumo yekukweva dhiza asati aenda zvake, kana anopikisa asingakwanise kuidzora nekuda kwenyaya dzakateedzana dzemutemo dzinofamba. Mushure mekunge mupikisi apedza danho rake, kufamba zvisiri pamutemo hakugadziriswe kunze kwekunge paine chibvumirano chakajairika pasina kupindira kwemutambi.
Tsananguro yeiyo algebraic system
C1 Mune rondedzero iyi, "chidimbu" zvinoreva chero chidimbu, kunze kwepaundi.
C2 Chikamu chimwe nechimwe chinoratidzirwa neyekutanga tsamba huru yezita racho. Muenzaniso: R = mambo, D = mambokadzi, T = rook, B = bhishopi, C = knight. (Muchiitiko chebhiza, kuti zvive nyore, shandisa N.)
C3 Kune iro rekutanga tsamba yezita rezvimedu, mutambi akasununguka kushandisa tsamba yekutanga yezita sekunowanzo shandiswa munyika yake. Muenzaniso: F = fou (chiFrench bhishopi), L = loper (chiDutch kuna bhishopi). Mumagazini akadhindwa, kushandiswa kwezvipfeko kunokurudzirwa.
Pawns C4 Izvo hazviratidzwe netsamba yavo yekutanga, asi zvinozivikanwa nekusavapo kwavo. Semuenzaniso: e5, d4, a5.
C5 Makoramu masere (kuruboshwe kurudyi chena uye kurudyi kuruboshwe kune nhema) zvinoratidzwa nemavara madiki, a, b, c, d, e, f, g, uye h, zvichiteerana.
C6 Mitsara sere (kubva pasi kusvika kumusoro kune chena mutambi uye kubva kumusoro kusvika pasi kumutambi mutema) akaverengwa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uye 8, zvichiteerana. Nekudaro, munzvimbo yekutanga, zvidimbu zvichena zvinoiswa mumutsara wekutanga newechipiri; Zvimedu zvidema zvinoiswa mumitsara yechisere neyechinomwe.
C7 Semhedzisiro yemitemo iri pamusoro, rimwe nerimwe remabhokisi makumi matanhatu nematanhatu rinogara richiratidzwa nekubatanidzwa kamwe chete kwetsamba ine nhamba
C8 Kufamba kwega kwega kwechimedu kunoratidzwa ne a) tsamba yekutanga yezita rechidimbu chiri mubvunzo uye b) nzvimbo yekusvika. Iko hakuna dash pakati pe) na b).
Mienzaniso: Be5, Nf3, Rd1.
Panyaya yevanofamba netsoka, inzvimbo chete yekusvika ndiyo inoratidzwa. Mienzaniso: e5, d4, a5.
C9 Kana chidimbu chikabatwa, x inoiswa pakati (a) tsamba yekutanga uye zita rechidimbu chiri kubvunzwa uye b) nzvimbo yekusvika. Mienzaniso: Bxe5, Nxf3, Rxd1. Kana iyo pawn yaita kubata, iyo yekutanga ikholamu inofanirwa kuratidzwa, ipapo x, pakupedzisira iyo mraba wekuuya. Mienzaniso: dxe5, gxf3, axb5. Muchiitiko che 'en passant' kubatwa, nzvimbo inonongedzwa inopihwa, inoratidza kuti pawn yakazogumira kupi, uye mavara 'ep' anowedzerwa kune notation. Semuenzaniso: exd6 ep
C10 Kana mataira maviri akafanana achigona kuenda kukona imwechete, iyo tile inofamba inoratidzwa seinotevera:
Kana zvidimbu zvese zviri mumutsara mumwechete: na a) tsamba yekutanga yezita rechimedu, b) ikholamu yenzvimbo yekuenda, uye c) nzvimbo yekusvika.
Kana zvidimbu zviviri zviri mukolamu imwechete: na a) tsamba yekutanga yezita rechimedu, b) mutsara wenzvimbo yekuenda, uye c) nzvimbo yekusvika
Kana zvidimbu zviri mumakoramu akasiyana uye mitsara, nzira 1) iri nani. Panyaya yekutora, 'x' inogona kuwedzerwa pakati b) na c).
Kune maviri ma knights, mumakwere g1 uye e1, uye imwe yadzo inofamba kuenda kukwere f3: Ngf3 kana Nef3, sezvazvingave zviri.
Kune maviri ma knights, pane iyo g5 uye g1 zvikwere, uye imwe yadzo inofamba kuenda kune f3 square: C5f3 kana C1f3, sezvazvingave zviri.
Iko kune maviri ma knights, mumba h2 uye d4, uye imwe yadzo inofamba ichienda kuimba f3: Nf3 kana Ndf3, sezvazvingave zviri.
Kana kubata kukaitika mufuremu f3, iyi mienzaniso iripamusoro inoshandurwa nekuwedzera 'x':
1) Kana pawns maviri anogona kutora chidimbu chimwe chete nemupikisi, iyo pawn yakatama inoratidzwa ne a) tsamba yekoramu yekutanga, b) 'x', c) yekupedzisira mraba. Semuenzaniso: kana paine chena pawn pazvikwere c4 uye e4 uye dema chidimbu pane d5, notation yekutama kwaWhite ndeye cxd5 kana exd5, sezvakakodzera
Panyaya yekusimudzirwa kwepamberi, kufamba kwepaini kunoratidzwa, kunoteverwa nekukurumidza netsamba yekutanga yechimedu chitsva. Mienzaniso: d8D, f8C, b1B, g1T.
Chipo chinopihwa chinofanira kumakwa se (=)
0-0 = mold neshongwe h1 kana shongwe h8 (dombo diki)
0-0-0 = muforoma neshongwe a1 kana shongwe a8
(dombo hombe) x = inotora
+ = cheki ++ kana # = kutarisa
ep = kubata "kupfuura"
Izvo hazvimanikidze kunyora cheki, kutarisa uye kutora paspredishiti.
Kukurumidza kunopera pasina muridzi aripo panzvimbo yemutambo
Muzviitiko apo machisa anotongwa nezvakapihwa muChinyorwa 10, mutambi anogona kutora dhiza kana aine maminetsi asingasviki maviri paawa yake uye museve wake usati wadonha. Izvi zvinogumisa mutambo. Unogona kukumbira zvichibva pa:
kuti muvengi wako haakwanise kukunda nenzira dzakajairika, uye / kana
kuti muvengi wako haasi kuedza kuedza kuhwina nenzira dzakajairika.
Mune fungidziro (a), mutambi anofanirwa kunyora yekupedzisira nzvimbo uye anopikisa anoiongorora.
Mune fungidziro (b), mutambi anofanirwa kurekodha chinzvimbo chekupedzisira mune yakagadziridzwa spreadsheet.
Anopikisa anofanira kuongorora zvese pekupedzisira nzvimbo uye pepa rekushandira.
Chichemo ichi chinofanirwa kuendeswa kune mutongi, uyo sarudzo yake ichave yekupedzisira.
Mitemo yemutambo nemapofu uye vanhu vanoona zvishoma.
Vatungamiriri veE1 makwikwi vanofanirwa kuve nesimba rekugadzirisa mitemo yakanyorwa pazasi zvinoenderana nemamiriro emuno.
Mumakwikwi chess pakati pevanoona vatambi uye vatambi vasina kuona (zviri pamutemo bofu), chero mutambi angangoda kushandiswa kwemabhodhi maviri, vatambi vanoona vane bhodhi rakajairika, uye mutambi asina kuona ane bhodhi rakavakwa. Dhizaini yakanyatsovakwa inofanira kusangana nezvinodiwa zvinotevera:
zviyero zvishoma 20 x 20 cm;
dzimba dzevatema dzakamborerutswa zvishoma;
gomba diki mune imwe neimwe imba;
Chidimbu chimwe nechimwe chinofanirwa kuve nepini diki inokwana zvakakwana mugomba redzimba;
"Staunton" modhi zvidimbu, zvidimbu zvidema zvakanyatso nyorwa.
E2 Iyi inotevera mitemo inofanira kutonga mutambo:
1. Zvipo zvinofanirwa kuziviswa zvakajeka, zvinodzokororwa nemupikisi uye kuurayiwa mubhodhi rake. Kana uchisimudzira pawn, mutambi anofanira kuzivisa kuti ndechipi chidimbu chakasarudzwa Kuita kuti chiziviso chive chakajeka sezvinobvira, zvinokurudzirwa kushandisa
Aya anotevera mazita pane iwo anoenderana algebraic mavara
Iyo mitsara kubva chena kusvika nhema inofanirwa kuve nenhamba muchiGerman:
8 acht (sere)
Kukandwa kunoziviswa "Lange Rochade"(Grande Roque mumutauro wechiGerman) uye" Kurze Rochade "(Kukanda kudiki mumutauro wechiGerman).
Zvidimbu zvinoshandisa mazita echiGerman mazita:
"Koenig "(King)," Dame "(Mambokadzi)," Turm "(Rook)," Laeufer "(Bishop)," Springer "(Bhiza) uye" Bauer "(Pawn).
Pane bhodhi yemutambi asingatarisike, chidimbu chinofungidzirwa kunge chakabatwa kana chabviswa mugomba rekugadzirisa.
Chipo chinofungidzirwa kuti chingaitwa kana:
mune yekubatwa, kana chidimbu chakatorwa chabviswa mubhodhi remutambi uyo mukana wake kutamba;
chikamu chakaiswa mune rimwe gomba rekugadzirisa;
Ipapo chete ndipo panotanga wachi yemupikisi.
Angoti poindi 2 ne3 pamusoro zvangosanganiswa, iyo yakajairwa mitemo inoshanda kune wekushopera mutambi.
4. Iko kushandiswa kweiyo yakanyatso kuvakwa wachi yemutambi asingaone zvakanaka inobvumidzwa. Iyo wachi inofanirawo kunge iine hunhu hunotevera:
dial yakagadziridzwa nemaoko akasimbiswa, iine maminetsi mashanu ega ega akaratidzirwa nedoti uye yega maminetsi gumi nemashanu aine maviri madhi;
Museve unogona kunzwika zviri nyore nekubata. Kuchenjerera kunofanirwa kutorwa kuti miseve igadziriswe zvakanaka kuitira kuti mutambi anzwe maoko emaminetsi mashanu ekupedzisira eawa izere.
Mutambi asingaoni anofanirwa kurekodha mutambo muBraille, kana kunyora mafambiro nemaoko, kana kuarekodha pagneti tepi.
Chero zvikanganiso mukuzivisa kwekufamba kunofanirwa kugadziriswa nekukasati wachi yemupikisi yatanga.
Kana panguva yemutambo nzvimbo dzakasiyana dzinoonekwa pamabhodhi maviri, ivo vanofanirwa kugadziriswa nerubatsiro rwemureferi uye kubvunza mapepa ekushandira evatambi vaviri. Kana iwo maviri mapepa ekushambadzira achienderana, mutambi akanyora danho nemazvo, asi akarikanganisa zvisirizvo, anofanira kugadzirisa chinzvimbo chavo kuti chienderane nekufamba kunoratidzwa pamashizha.
Kana paine kupesana mumashizha maviri ekushandira, chinzvimbo chinofanira kugadzirwazve kusvika panobatana mapepa maviri ekushandira uye mupomeri anozogadziridza mawachi zvinoenderana kana zvichidikanwa.
Mutambi asina kuona anozove nekodzero yekushandisa mubatsiri anozoita chero kana zvese zvinotevera zvisungo:
Ita mutambi wega wega kufamba pane bhodhi remupikisi.
Zivisa mafambiro evatambi vese;
Nyora mafambiro pane pepa rekushandira remutambi asingaone uye tanga wachi yemupikisi (uchifunga nezve mutemo 3.c);
zivisa mutambi asingaone zvakanaka, chete pakukumbira kwake, huwandu hwenzendo dzakaitwa uye nguva yakashandiswa nevatambi vese;
kutora kukunda kana wachi yemupikisi yadonha uye zivisa muridzi wepembe kana mutambi wekufungidzira abata chimwe chezvidimbu zvake.
Ita nzira dzinodiwa kuitira kuti kumiswa kusimuke.
10. Kana mutambi asingatarise asingashandisi mubatsiri, mutambi anoona anogona kukumbira mumwe munhu kuti atore mutoro wekuzadzisa zvisungo zvataurwa muzvikamu 9.a na 9.b.
Chess inotonga 960
F1 Pamberi pemutambo weChess960, chinzvimbo chekutanga chinoiswa zvisingaite, zvichiteerana nemimwe mitemo. Mushure meizvozvo, mutambo unotambwa nenzira imwecheteyo seyakajairika chess. Kunyanya, zvidimbu uye pawns zvine zvadzinofamba, uye chinangwa chemumwe mutambi ndechekutarisa mambo wemupikisi.
Zvinotarisirwa kutanga chinzvimbo
Nzvimbo yekutanga yeChess960 inofanira kutevera mimwe mitemo. Iwo machena pawn anofanirwa kuiswa mumutsara wechipiri seyakajairwa chess. Ese akasara machena zvidimbu akaiswa zvisina mutsetse pamutsara wekutanga, asi pamwe nezvinotevera zvinotevera.
Mambo anoiswa kumwe kunhu pakati peshongwe mbiri, uye
Mabhishopi anoiswa mudzimba dzemavara akatarisana, uye
Iwo matema matema anoiswa akanyatsotarisana nechena zvidimbu.
Chinzvimbo chekutanga chinogona kugadzirwa usati waenda, kungave nepurogiramu yemakomputa kana nekushandisa data, mari kana makadhi, nezvimwe.
Chess960 castling mitemo
Chess960 inobvumidza mutambi wega wega kukanda kamwe pamutambo, mumubatanidzwa mambo uye rook inofamba mukufamba kumwe chete. Nekudaro, kumwe kududzirwa kwemutambo wechess wecss unodiwa pakukanda, nekuti tsika dzechivanhu dzinotora nzvimbo dzekutanga dzamambo uye rook izvo zvisingawanzo kushanda kune 960 chess.
MuChess960, zvinoenderana nenzvimbo yamambo uye rook pamberi pekukanda, kukanda kunoitwa uchishandisa imwe yenzira ina:
Double rock move: kufamba namambo kuchiteverwa nekufamba ne rook.
Kukanda nekuchinja: kuchinjanisa chinzvimbo chamambo neicho che rook.
Kukanda namambo mumwechete famba: Gadzira mambo mumwe chete kufamba.
Kanda shongwe imwe chete inofamba: Ita chete shongwe imwe chete inofamba.
Kana ikakandwa pabhodhi repanyama ine munhu anopikisana naye, zvinokurudzirwa kuti mambo abve pamusoro pebhodhi padyo nenzvimbo yayo yekupedzisira, rook ichatama kubva pachinzvimbo chayo chekutanga kuenda kunzvimbo yayo yekupedzisira, uye pakupedzisira mambo achaiswa. Kwaunoenda kumba.
Mushure mekukanda, zvigaro zvekupedzisira zve rook namambo zvaizove zvakafanana necassical chess.
Saka mushure mehukuru castling (inozivikanwa se0-0-0 uye inozivikanwa saamambokadzi-parutivi castling mune orthodox chess, mambo ari mumba c (c1 chena uye c8 yevatema) uye rook iri mumba d (d1 chena uye d8 nhema) Mushure mekukanda mukwere g
1. Kuti udzivise chero mhosho, zvinokurudzirwa kuti uti "ndichavhura" usati waita chikumbiro.
2. Mune zvimwe zvinzvimbo zvekutanga, mambo kana rook (asi kwete ese ari maviri) haafambi panguva yekukanda.
3, mune dzimwe nzvimbo dzekutanga, castling inogona kuitwa nguva isati yakwana sekutanga kufamba.
Zvikwere zvese pakati penzvimbo dzinotangira nekuperera dzamambo (kusanganisira nzvimbo yekupedzisira), nezvikwere zvese zviri pakati penzvimbo dzekutanga nedzokuperera dzedokoro (kusanganisira nzvimbo yekuguma), dzinofanirwa kunge dzisina vanhu, kunze kwamambo uye rook squares .
Mune zvimwe zvinzvimbo zvekutanga, zvimwe zvikwere, izvo zvinofanirwa kunge zvisina muvanhu chess, zvinogona kugarwa panguva yekukanda. Semuenzaniso, mushure memahombe mahombe, zvinokwanisika, dzimba a, boe dzichiri kugarwa, uye mushure mekukandwa kudiki zvinoita kuti dzimba uye / oh vagare.
Nongedzo kana mutambo uchizoda kumbosendekwa
1. Kana mutambo ukasapera pakupera kwenguva yakatarwa yemutambo, muridzi wepembe anofanira kuona kuti mutambi ane nguva yekutamba, "simbisa" danho rinotevera. Mutambi anofanirwa kunyora kufamba kwake paspredishiti mune isinganzwisisike notation, isa pepa rake uye pepanhau remupikisi muhamvuropu, woisimbisa uye chete mushure meizvozvo mira wachi, pasina kutanga wachi yemupikisi.
Chero bedzi iyo wachi isingamire, mutambi anochengetera kodzero yekuchinja kwake kwakavanzika kufamba. Kana, mushure mekuziviswa nemureferi kuti danho rinotevera richava chakavanzika, mutambi anoita danho mubhodhi, anofanira kuzvinyora paspredishiti yake sekufamba kwake kwakavanzika.
EHE. Mutambi anozofunga kuti mutambi ane mukana wekutamba, uyo anoda kumbomisa kutamba chirongwa chisati chapera, akashandisa nguva yese yasara kupedzisa chikamu.
2. Hamvuropu inofanira kuratidza:
chinzvimbo ipapo pamberi pechivande kufamba, uye
nguva dzinoshandiswa nevatambi, uye
zita remutambi akaita kuti chakavanzika chifambe, uye
chakavanzika chinopa nhamba uye
kupihwa tie, kana chikumbiro chakaitwa mutambo usati wamiswa, uye
zuva, nguva uye nzvimbo yekutangazve kwemutambo.
3. Mutongi anofanira kuongorora kururama kwemashoko ari muhamvuropu uye anoona nezvekuchengetedzwa kwayo.
4.Kana mutambi achinge afunga tie mushure mekunge mupikisi aenda pachivande kufamba, zano racho rinoramba richishanda kudzamara mutambi wacho azvigamuchira kana kuzviramba, zvinoenderana nechinyorwa 9.1.
5Mutambo usati watanga, chinzvimbo ipapo pamberi pekufamba kwakavanzika chinofanira kuiswa pabhodhi uye, pamusoro pezvo, nguva inoshandiswa nevatambi pakamiswa mutambo inofanira kuratidzwa pamawachi.
6.Kana mutambo usati watangazve, vatambi vanodhirowa nekubvumirana, kana mumwe wevatambi azivisa muridzi wepembe kuti ave kuenda, mutambo wapera. Envuropu inofanirwa kuvhurwa chete kana mutambi anofanirwa kupindura muchivande kufamba aripo.
Kunze kwezviitiko zvakataurwa muzvinyorwa 5, 6.9 uye 9.6, mutambo wakarasika kune mutambi ane yakavanzika kufamba rekodhi
zvine mutsindo kana
inhema, zvekuti chirevo chayo chechokwadi hachigone kumisikidzwa, kana
Kana uchitangazve mutambo
mutambi kuti apindure kufamba kwakavanzika aripo, hamvuropu yakavhurwa, kufamba kwakavanzika kunoitwa pabhodhi uye anoisa wachi yake.
mutambi anofanirwa kupindura kufamba kwakavanzika haapo, wachi yake inofanira kunge iri. Paanosvika, mutambi anogona kumisa wachi yake oshevedza muridzi wepembe. Hamvuropu yakavhurwa uye kufamba kwakavanzika kunoitwa pabhodhi. Wachi yako inobva yatanga.
Mutambi akaita kufamba muchivande haapo, muvengi wake ane mvumo yekupindura paspredishiti yake, akanama spreadsheet rake muhamvuropu nyowani, kumisa wachi yake otanga muvengi, pane kupindura nenzira yakajairika . Mune ino kesi, iyo hamvuropu nyowani inofanirwa kuchengetwa mumaoko erefereti uye kuvhurwa mushure mekuuya kwemupikisi.
7. Mutambi anofanirwa kurasikirwa nemutambo kana akasvika pabhodhi nguva inopfuura awa imwechete kuti mutambo wekumisikidzwa utangezve (kunze kwekunge mitemo yemakwikwi yacho yajekesa kana mupomeri afunga neimwe nzira)
Nekudaro, kana mutambi akaisa chisimbiso pakavanzika ari mutambi anononoka, mutambo unopera neimwe nzira kana:
mutambi asipo ndiye anokunda nekuda kwekuti kufamba kwake muchivande kwakauraya muvengi, kana
mutambi asipo akaburitsa dhiza nekuti kufamba kwake 'kwakanyudza' mambo wemupikisi, kana chinzvimbo chakatsanangurwa muChinyorwa 9.6 chakaguma mubhodhi, kana
Mutambi aripo pabhodhi akarasikirwa nemutambo zvinoenderana neChinyorwa 6.9.
Kana iyo hamvuropu ine kufamba kwakavanzika yakanyangarika, mutambo unofanirwa kutangwazve kubva pachinzvimbo panguva yekumiswa uye nenguva dziri muma wachi dzakatarwa sepanguva yekumbomiswa. Kana iyo nguva inoshandiswa nevatambi isingakwanise kugadziriswazve, maawa acho anofanirwa kugadziridzwa nekufunga kwemuridzi. Mutambi akaisa chisimbiso pakavanzika anoita anotora danho rinoti "chakavanzika" pabhodhi.
Kana zvisingaite kudzoreredza chinzvimbo, mutambo wakanzurwa uye mutambo mutsva unofanirwa kutambwa.
Kana, kana uchitangazve mutambo, iyo nguva yakashandiswa haina kuratidzwa zvakanaka pane chero iwachi uye kana mumwe wevatambi akaitaridza vasati vatanga kufamba, iko kukanganisa kunofanira kugadziriswa. Kana iko kukanganisa kukasacherechedzwa, mutambo unofanirwa kuenderera pasina kururamisa, kunze kwekunge muridzi aziva kuti mhedzisiro yacho ichave yakakomba.
Iyo nguva yenguva yega yega yakamiswa chikamu chemutambo ichave inodzorwa neawa rekwikwidzi. Kutanga uye kupera nguva dzinofanirwa kuziviswa pamberi.
Videogiochi kutenderera neCloud Gaming di Stadia, Geforce Zvino, Playstation Zvino